Ciidanka xoogga Dalka oo soo qabtay xubin ka tirsanaa sahanka Al-Shabaab - WardheerNews
Ciidanka xoogga Dalka oo soo qabtay xubin ka tirsanaa sahanka Al-Shabaab
Nin Ka mid ah Al shabaab oo la qabtay
Kismaayo-(SONNA)- Howlgal ay si wadajir ah u fuliyeen cutubyo ka tirsan ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Jubbaland saacadihii lasoo dhaafay ayaa waxay kusoo qabteen xubin ka tirsanaa Al-Shabaab.
Ciidamada wadajirka ah ayaa gacanta kusoo dhigay, Ibraahim Lujende Maxamed, oo ka mid ahaa koox ilaalo u ahayd argagixisada oo ku dhuumaaleysanaysay degaanno ku dhow Baar Sanguuni ee gobolka Jubbada Hoose.
Ibraahim Lujende, ayaa sheegay in muddo 10 Sano ah uu u xirnaa Al-Shabaab laguna qasbay shaqada jaajuusnimada iyo xog uruurinta ah ee uu u hayay kooxda argagixisada ah.
Cabdi xukun, oo ka tirsan Saraakiisha qaybta 43-aad ee ciidanka Xoogga Dalka ayaa sheegay in ninkani uu ka mid ahaa koox afar ah, laba ka mid ihina ay hubeysnaayeen, kuwaas oo Al-Shabaab u qaabbilsanaa uruuurinta xogaha, balse saddexdii kale ay ka baxsadeen kuna raad joogaan.
Wuxuu sidoo kale sheegay in , Ibraahim Lujende, uu ka qeyb qaatay weerarkii ay Al-Shabaab 2015-kii ku qaadeen saldhig ciidan oo ay ciidamada Amisom ku lahaayeen degaanka Ceel Cadde ee Gobolka Gedo.
Cabdi xukun , ayaa dhallinyarada la qalday ee fekerkaa gurracan lagu shubay kula dardaarmay in ay kasoo noqdaan, wuxuuna intaa raaciyay in ay ka dowlad ahaan soo dhaweynayaan, si wanaagsanna ula dhaqmi doonaan.